लगानी | गृहपृष्ठ | Page 1554
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ ले चैत मसान्तको तुलना...
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टाको अवधिमा ६ दशमलव शून्य ९ अंकले घट्दा...
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन कारोबार भएको एक घण्टाको अवधिमा १०८ कम्पनीको रू. २० करोड २८ लाख बराबरक...
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयरलाई इक्रा नेपालले ग्...
पहिलो खुलामुखी म्युुचुअल फण्ड : एनआइबिएल सहभागिता फण्ड जेठ १९ देखि विक्री खुला
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । एनआइबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनआइबिएल सहभागिता फण्डले जेठ १९ गतेदेखि १ करोड...
आरती पावर कम्पनीको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । आरती पावर कम्पनीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संयुक्त वार्षिक साधारण सभा जेठ २९ गते सिद्धार...
समायोजन पछि कति भयो प्राइम कमर्सियल बैंकको मूल्य ?
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । प्राइम कमर्सियल बैंकको १६ प्रतिशत बोनस शेयरको समायोजन पछि मूल्य रू. ३ सय १८ दशमलव ९७ तो...
२ अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक (१२ : ३० बजेको अपडेट)
on: २६ श्रावण २०७२, मंगलवार ००:०० लगानी
साउन २६, काठमाडौँ । मङ्गलबार नेप्से परिसूचक २ दशमलव २९ अङ्क अर्थात् शून्य दशमलव २१ प्रतिशत बढेको छ । १ हजार ८१ दशमलव ३६ विन्दु बाट खुलेको बजार आधा घण्टाको व्यापारमा १ हजार ८३ दशमलव ६५...	बिस्तृतमा
रुरल माईक्रोफाइनान्सको शेयर अभौतिकीकरण
साउन २६, काठमाडौं । रुरल माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेण्टर लिमिटेडको शेयरहरु साउन ३२ गते देखि राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य अभौतिक रुपमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर अभौतिकीकरण गर्...	बिस्तृतमा
विराटलक्ष्मी विकास बैङ्कको शेयर अभौतिकीकरण
साउन २५, काठमाडौं । विराटलक्ष्मी विकास बैङ्क लिमिटेडको शेयरहरु भदौ ७ गते देखि राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य अभौतिक रुपमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर अभौतिकीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ...	बिस्तृतमा
श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सको खुद मुनाफा रू. ३ करोड
साउन २६, काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको असार मसान्तसम्म खुद मुनाफा रू. ३ करोड १ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ७ दशमलव ५५ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको पछिल्लो समय...	बिस्तृतमा
एक्सेल डेभलपमेण्ट बैङ्कको निष्कृय कर्जा १ दशमलव ६१ प्रतिशत
साउन २६, काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडको असार मसान्तसम्म खुद मुनाफा रू. ७ करोड १४ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा बैङ्कको कर्जा...	बिस्तृतमा
सिद्धार्थ बैङ्कको खुद मुनाफा रू. ७६ करोड
साउन २६, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैङ्कको असार मसान्तसम्म खुद मुनाफा रू. ७६ करोड ३७ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ९ प्रतिशत बढी हो । बैङ्कको पछिल्लो समयमा खराब कर्जा रहेको रू. १९ करोड ७...	बिस्तृतमा
गरिमा विकास बैङ्कको निष्कृय कर्जा शून्य दशमलव २४ प्रतिशत
साउन २६, काठमडौं । गरिमा विकास बैङ्कको असार मसान्तसम्म खुद मुनाफा रू. १६ करोड ३१ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ५८ प्रतिशत बढी हो । बैङ्कको अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सञ्चालन मुनाफ...	बिस्तृतमा
सोसाइटीको आयो नयाँ व्याजदर
साउन २६, काठमाडौँ । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेडको निक्षेप योजनाहरुमा ४ प्रतिशत देखि ८ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म व्याजदर निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी कर्जा तथा प्रवाहमा ५ प्रतिशत देखि १५ प्रति...	बिस्तृतमा
आइसिएफसि फाइनान्सको खुद मुनाफा रू. ६ करोड
साउन २६, काठमाडौं । आइसिएफसि फाइनान्सको असार मसान्तसम्म खुद मुनाफा रू. ६ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १८ प्रतिशत कम हो । कम्पनीको सोही अवधिमा लगानी ५५ र कर्जा तथा सापटी १० दशमलव ९...	बिस्तृतमा
तिनाउ विकास बैङ्कको शेयर अभौतिकीकरण
साउन २६, काठमाडौं । तिनाउ विकास बैङ्क लिमिटेडको शेयरहरु भदौ ७ गते देखि राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य अभौतिक रुपमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर अभौतिकीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यस...	बिस्तृतमा